Nzira yekutsvaga Nhoroondo muSafari yeMac | Ndinobva mac
Nhoroondo ndeimwe yezvakakura zvakagadzirwa nemabhurawuza izvo isu tese tanga tambove nazvo, pane dzimwe nguva, kushandisa, kungave kuwana peji ratisingamake bookmark kana nekuti tiri kufarira kuverenga zvekare imwe nyaya yatisingatumire isu kunyorera. chengetedza zvinyorwa uye uverenge gare gare.
Mazhinji mabhurawuza anochengeta zvinyorwa zvemapeji ese ewebhu atinoshanyira, chero bedzi tisina incognito modhi yakachengetwa. Safari haina kusiyana pane izvi. Kana iwe uri muverengi anofarira nhau kuburikidza neSafari, nhoroondo yako yezuva nezuva ingangodaro yakareba kupfuura zuva risina chingwa. Muchikamu chino tinokuratidza maitiro atingaite kuwana nhoroondo uye kutsvaga yemapeji ewebhu atakamboshanyira neSafari.
Kana tichitarisa nhoroondo yeSafari, kana chero imwe browser, kazhinji tinogadzira mepu yepfungwa mumusoro medu kuti tizive, zvakanyanya kana zvishoma, anga ari mapeji atakashanyira kare uye / kana mushure mewebhu Tiri kutsvaga chii. Maitiro aya anogona kunge akaomarara kana iyo nhoroondo yakarebesa kana kana yakawanda nhoroondo ichitiratidza iro rewebhu peji riine ma URL akasiyana.
1 Maitiro ekuwana nhoroondo yeSafari
2 Nzira yekutsvaga Safari Nhoroondo
Maitiro ekuwana nhoroondo yeSafari
Kuti uwane iyo nhoroondo yeSafari, isu tinongofanirwa kuvhura bhurawuza uye enda kune iyo yepamusoro menyu bar nekudzvanya paNhoroondo. Mukati meiyi menyu, nhoroondo yakarongedzwa nemazuva inoratidzwa kuti inokwanisa kukurumidza kubvunza pamwe chete neayo ekupedzisira mapeji ewebhu atakamboshanyira.
Kuti uwane iyo yakazara rondedzero yenhoroondo yakachengetwa mune yedu Safari browser, isu tinofanirwa tinya pane yekutanga sarudzo Ratidza nhoroondo. Panguva iyoyo, ichavhura pane iyo tabu iyo yatinowana iyo Safari nhoroondo yakarongedzwa nemazuva uye inoratidza huwandu hwemapeji akasiyana ewebhu atakashanyira.
Nzira yekutsvaga Safari Nhoroondo
Kana tangosvika nhoroondo yeSafari, tinofanirwa kuenda ku Kona yekurudyi yekumusoro, kubhokisi rekutsvaga uye nekuisa mazwi ekutsvaga atinoda kuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Nzira yekutsvaga Nhoroondo muSafari yeMac
Aya ndiwo maSDD matsva eWD anomhanya achipisa